China Umgangatho ophezulu weTekhnoloji yeTrampoline Socks mveliso kunye nabenzi | USunnan
Umgangatho oPhezulu weFektri yoThungelwano oluSebenzayo oluSebenzayo
Iikawusi ze-sunnan trampoline zilungele ukunxiba mihla le okanye iipaki zetrampoline.
Inombolo yomzekelo: SN-S1104
Igama lemveliso Umgangatho oPhezulu weFektri yoThungelwano oluSebenzayo oluSebenzayo
Inombolo yomzekelo SN-S1104
Umgangatho ophezulu woLusu oluValiweyo: Iikawusi ezi-Anti-Skid Trampoline zinovavanyo olungqongqo lomgangatho, kwaye umqhaphu othambileyo ukhululekile ngelixa uqinisekisa impilo kunye nokhuseleko lwazo.
Isixhobo sokuzivocavoca ngokugqibeleleyo: Chitha ixesha elininzi ujonge kwimithambo yakho kwaye ungabi naxhala lide ngokuhlala uthe nkqo! Iikawusi zethu ze-ballet barre, ezibambekayo kwaye kulula ukuzipakisha, zilungile xa usenza umthambo kwiindawo ezimtyibilizi ezinje ngeeplanga zethayile okanye iikhaphethi. Zilungele ii-pilates, i-yoga, i-barre, umdaniso, ubugcisa be-kartial, i-trampoline, ukomelela, isibhedlele, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, ulungelelwaniso lwasekhaya kunye nomzimba.
Ukuthuthuzela nozinzoNokuba uhamba kwiindawo ezimtyibilizi ekhaya okanye ubambe iplanga kwiyoga / pilates, kufuneka iisokisi ezihlaziyayo ezikunika uzinzo. I-trampoline yeSungnan bamba iikawusizenzelwe ukwandisa ukubambeka kunye nokuziva ukhululekile ukunxiba ngokungaqhelekanga. Zive ukhululekile kwaye ukhuselekile xa uhambahamba phantsi komthi okhuni endlwini yakho, wenza i-yoga, udlala kwiipaki ze-trampoline, okanye uxhomeke esofeni. Kwaye uthathe intuthuzelo ngokwazi iikawusi zethu ziyilelwe ukukhuthaza ukhuseleko kunye nozinzo kubantu bayo yonke iminyaka kunye nobukhulu.
Hlamba UmyaleloIsindululo sokuhlamba izandla kuphela ngaphantsi kwe-86 yeFahrenheit yaManzi. Umoya wome. Suku-ayina.
Yamkela inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM: Sinezixhobo ezikhethekileyo kwiikawusi ngaphezulu kweminyaka eyi-10. Sisebenza kakuhle kwaye sinokwenza iikawusi zesiko ngokulula. Ngayo nayiphi na ingcinga enesibindi, sinokuyenza ibe sock! Ngokwenyani sinokuvelisa iikawusi esele zikho nakwesiphi na isitayile. Ngaphezulu kweesokisi ze-OEM zesiko, sinoyilo lwethu. Abaqulunqi bethu basebenza ngokukhethekileyo ekukhonzeni abathengi simahla. Ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso uyilo lwakho okanye ukongeza uphawu lwakho. Isampula yokwamkela.
Egqithileyo I-Bespoke Non Slip Socks Iisokisi zeYoga zoPapasho lweLifu iTrampoline Socks
Okulandelayo: Amadoda amaSokisi aMadoda aKhatywayo aNgena iZilayidi zeTrampoline